Movistar မှ LG G3 တွင် OTA | မှတဆင့် Android Lollipop ရရှိထားပြီးဖြစ်သည် Androidsis
ပြီးခဲ့သည့်ညကကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောအသိပေးချက်ကျွန်ုပ်ဆီသို့ရောက်လာသည် Movistar မှ LG G3မော်ဒယ်လ် D855 သည်ရရှိနိုင်သည့် system update ကိုတင်ပြခဲ့သည် 520 Mb။ ငါလျင်မြန်စွာချမ်းသာလက်ခံစတင်ခဲ့သည် အကြောင်းကြားစာနှင့် firmware ကို download လုပ်ပါစကားမစပ်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကမ္ဘာကြီးနှင့်အသစ်ပြုပြင်ရန်အခြားအချိန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါဒီအချိန်မှာ firmware ကိုဒေါင်းလုပ်ဆာဗာများကျလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
Terminal ကိုပြန်လည်စတင်ပြီး system settings မှကျွန်ုပ်၏သံသယများကိုအတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည် ဖုန်းအကြောင်းအမှန်ပင်စစ်ဆေးပါ Movistar မှ LG G3 ကို Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်သော်လည်းပြန်လည်စတင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အသစ် update အသစ်တစ်ခုခုန်တက်လာသည် 20 Mb Android 5.0 Lollipop ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် patch အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ဒါကြောင့်ငါတို့သေချာသေချာစေရန်အနေအထား၌ရှိကြ၏ Movistar မှ LG G3 သည်သူတို့နှစ်ရှည်လများစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Android Lollipop update ကိုလက်ခံရရှိနေသည် Android 5.0 ။
ကျွန်ုပ်၏ LG G3 သို့ Movistar မှအသစ်ပြောင်းခြင်းရှိမရှိမည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း။
Movistar မှ LG G3 အတွက် Lollipop ကို Android Lollipop သို့ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောနှင့်ကြာရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော update ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏အသိပေးချက်ကုလားကာကိုကြည့်ရန်လုံလောက်ပေလိမ့်မည်။ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်သည် ချိန်ညှိချက်များ / ဖုန်းအကြောင်း / SW update လုပ်သည် နှင့်ပြောသောအစိတ်အပိုင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ SW update ကို ပြီးနောက်ကိုနှိပ်ပါ SW အသစ်ရှာရန်.
သတိပေးချက်ကိုသင်လက်လွတ်လျှင်သင်လုပ်သင့်သည် firmware ကို download လုပ်ပါ ငါပြောသည်မှာ၎င်းသည်မည်သည့်အရာမျှမပါ ၀ င်ပါ။ 520 Mb ထက်မနည်းပါ။ ထို့ကြောင့် Wi-Fi ကွန်ယက်သို့ချိတ်ဆက်သောအခါ update နှင့် download ကိုအကြံပြုပါသည်။
Movistar မှ LG G3 အတွက် Android Lollipop Firmware ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသည်နှင့်တပ်ဆင်မှုကိုလက်ခံရပါမည်။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal သည်ပြန်လည်စတင်မည်။ Movistar မှ Android Lollipop သို့ LG G3 ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ.
အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်ခဏကြာပါလိမ့်မည် ၁၅ မိနစ်အထိသွားနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့် Terminal ကိုမပိတ်ပါနှင့်၊ ၎င်းမှဘက်ထရီကိုလျော့နည်းစေသည်။ LG logo ပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုကျောက်ချထားသည့်အတိုင်းမိနစ်အနည်းငယ်မျှဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်နောက်ဆုံး၌ပြန်လည်စတင်မည် အန်းဒရွိုက် 5.0 Lollipopအထူးသဗားရှင်း၌တည်၏ v20e.
ယခုငါတို့တ ဦး တည်းကိုကျော်သွားသင့်ပါတယ် အသစ် SW update ကိုရရှိနိုင်ပါပြီ20 megabytes ကျော်လေးပြီးအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအရာများပါ ၀ င်သည် Google Patch ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ Android Lollipop မှ Movistar မှ LG G3 firmware ဗားရှင်း v20f ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » Movistar ၏ LG G3s များသည်၎င်းတို့၏ကြာရှည်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသော Android Lollipop ကို update ရရှိသည်
မာတင် Arce ဟုသူကပြောသည်
ထိုအခါ g2 ဘယ်တော့မှမ
Martin Arce အားပြန်ပြောပါ
ဥရောပနှင့်အော်ပရေတာမရှိသော LG G2s များသည် Lollipop သို့ ၃ လခန့်အမြင့်ဆုံးအထိတရားဝင်တရားဝင်အဆင့်မြှင့်တင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ အော်ပရေတာတွေကတစ်လကို LG G3 နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ကြပြီး၎င်းမှာလည်းရှိမယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။
အခမဲ့ဥရောပအရာရှိမှထွက်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Roms များကိုတရားဝင်ထပ်မံအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ချက်ပြုတ်ကြလိမ့်မည်။
paulo arriaran ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင် movistar မှ LG G3 D855 ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဘိုလီးဗီးယားသို့ရောက်နေပါပြီ။ အသစ်ပြောင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားဤတွင်တရားဝင်ရောက်ရှိလာမည်လားဆိုသည်ကိုသိလိုပါသည်။ သို့မဟုတ်မည်သည့် အချိန်မှစ၍ မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ LG PCsuite က update ကငါ့ကို skips ... ပထမ ဦး ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
paulo arriaran သို့ပြန်သွားရန်
ငါ့မှာ lg g3 D855p ပေါ့။ ကျွန်ုပ်သည်ပီရူးမှ Movistar နှင့်အတူရှိသလား။ update ကိုဒီမှာရောက်လာမည်လားသိလား။
ဟစ္စကိုစကို၊ ငါ movistar မှာ ၀ ယ်ခဲ့တဲ့ lg g3 d855၊ သင်စပိန်မှာနေသလား။ ကိုလံဘီယာမှအလားတူသတင်းများအတွက်ပြင်ဆင်မလားသိလား။
Argoitz razkin ဟုသူကပြောသည်
Movistar Note3ကိုဘယ်အချိန်မှာအသစ်ပြောင်းမယ်လို့သင်ထင်သလဲ။ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့သူတို့ update လုပ်လိမ့်မယ်လို့ထင်သလား။
Argoitz Razkin အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖုန်းကိုမရရှိနိုင်ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်၏ကိရိယာကိုရလို့ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ
မင်္ဂလာပါ။ Lolipop ဆိုတာဘာလဲ? root user ဖြစ်ဖို့လား။ ဒါမှမဟုတ် Lolipop နဲ့ပုံမှန် update တစ်ခုလား။
ငါ Elidia ကိုချစ်ဖို့စာပြန်ရန်
Weak Control ဖြင့်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်မှသင့်ကွန်ပျူတာသို့စီးဆင်း [ROOT]
WhatSim: WhatsApp အတွက်ပထမဆုံးသီးသန့် SIM ကဒ်မွေးဖွားသည်